15 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 38 ယူကရိန်း, ဥရောပ, လောက, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း 0
ကြေညာချက်ယူကရိန်းအခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီး Vladislav Krikliy အဆိုအရယူကရိန်းအစိုးရနဲ့အချိန် 2019 ရဲ့အစီအစဉ်၏အဆုံးအထိရထားလမ်းပေါ်တွင်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများအတွက်ရှေ့ပြေးစီမံကိန်းစတင်ရန်။
Krikliy, "ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တစ်ဦးရည်မှန်းချက်ကြီးရည်မှန်းချက်ရှိသည်: ။ စီမံကိန်းလုပ်ဖို့ယခုနှစ်ပုဂ္ဂလိကလေ့လာရေးခရီးသွားအဆုံးပေါ်လေယာဉ်မှူး" သူကဆိုသည်။
အများဆုံးအမြတ်အစွန်းဒေသများအားလုံးကြီးမားသောကုမ္ပဏီများအားပေးထား ", ကမှန်ကန်သောလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းယူကရိန်းမီးရထားသူ့ဟာသူလုံလောက်သောဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲပေးရန်ပျက်ကွက်သောကြောင့်, သို့သော်အထူးဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲ, ကောင်းလှ၏။ "သူကဆိုသည်။
Krikliy အဆိုအရခေါငျးသေးဆုံးဖြတ်သည်ခံရဖို့အထူးလိုင်းများအတွက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အများအပြားကရွေးချယ်စရာအကောင့်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်။
လောလောဆယ်တစ်ခုတည်းသောကုမ္ပဏီ Ukrzaliznytsi မှယူကရိန်းယူကရိနျးပွညျနယျမီးရထားရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးခွင့်ရှိသည်။ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများသူတို့ယူကရိန်းမှာရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးစတင်အခါသူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စျေးနှုန်းများကိုသတ်မှတ်ပေမယ့်ပြည်နယ်လိုင်းများအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ် coordinate သင့်တယ်ဟုပြောသည်ပါလိမ့်မယ်။
Elvan: Ordu-Giresun လေဆိပ်၏ပထမတစ်ဝက်တစ်နှစ်အချိန်ကာလသတ်မှတ်ပျံသန်းမှုစတင်ပါလိမ့်မယ် 06 / 02 / 2015 Elvan: ယခုနှစ်ပေါ်တွင်စီစဉ်ထားbaşlayacak.ulaştır၏ Ordu-Giresun လေဆိပ်ပထမနှစ်ဝက်, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Lutfi Elvan, သမုဒ္ဒရာအတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်သူသည် Ordu-Giresun လေဆိပ်တူရကီအတွက်မတ်လအကုန်တွင်ပြီးစီးလုပ်ဖို့အတူ Filler ကဆိုသည်။ Elven, သူတို့ကယခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်ကာလအတွင်းထိုဒေသတွင်အချိန်ကာလသတ်မှတ်ပျံသန်းမှုစတင်ပါလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ terminal ကိုအဆောက်အဦးအပေါ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်လမ်းကြောင်းများပြီးစီးကဏ္ဍများကိုဖြည့်ပါကသူတို့ကိုတင်ဆောင်လာသောဝန်ကြီး Lutfi Elvan, ရဟတ်ယာဉ်ပြီးနောက်လေဆိပ်ပထမဦးဆုံးဆင်းသက်စေခဲ့သည်။ ဝန်ကြီးများ Elvan ကြည်းတပ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှစ်အရွယ် Irfan Balkanlıoğluနှင့်အခြားအရာရှိများကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါလမ်းကြောင်းနှင့် Elvan အပေါ်ယာဉ်များစောင့်ဆိုင်းရန်အဖို့မြေမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်၏ဧရိယာ၌စီးနင်းပြီးနောက်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးတှငျတှေ့လေဆိပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်များဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ယနေ့မိမိတို့ကိုယ်အဘို့အ ...
ယခုအချိန်တွင် 22 ကီလိုမီတာ Kadikoy-Kartal မက်ထရိုသြဂုတ်လ 17 အတွက်အချိန်ပေါ်စတင်မည် လာ. , 08 / 08 / 2012 Metro သမ္မတနိုင်ငံသမိုင်းမှာအကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖွင့်လှစ်။ စီမံကိန်းများထဲမှပြီးစီးရန်မှတ်တမ်းများလေ့လာမှု 22 Kadikoy-Kartal မက်ထရိုအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးစတင်ခဏအကြာအဖြစ်စံချိန်အချိန်မှာတော့ 17 ၏ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံးတူးဖော်တွေ့ရှိဥမင်လိုဏ်ခေါင်းခေါင်းစဉ်အဆုံးသတ်ကီလိုမီတာ Kadikoy-Kartal မက်ထရို 2008 သြဂုတ်လအစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့အရေးအပါဆုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတစ်ချိန်ကစတင်မည် တူးဖော်ကြောင်းအဆင့်မှာကောက်ယူခဲ့သည်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဘေးထွက် Anatolia ရဲ့အဆုံးမှာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေ့လာမှုများ၏အရေးအပါဆုံးနည်းလမ်းအဖြစ်မှတ်တမ်းများဖြတ်သန်းကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံးတူးဖော်တွေ့ရှိဥမင်လိုဏ်ခေါင်းလည်းဝန်ဆောင်မှုထဲသို့သွင်းထားလိမ့်မည်။ 22 နှင့်အတူနည်းပညာတက္ကသိုလ်ပစ္စည်းကိရိယာများအရှည် Kadikoy-Kartal အတွက်ကီလိုမီတာလိုင်း 1-1.5 သန်းခရီးသည်တစ်နေ့လျှင်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ 2013 ယခုနှစ်အဆုံးမှာဝန်ဆောင်မှုထည့်သွင်းရန်မျှော်လင့် ...
Bursa T1 အချိန်လမ်းရထားလိုင်းကိုစက်တင်ဘာလထဲမှာစတင်ပါလိမ့်မယ် 25 / 05 / 2013 စက်တင်ဘာလအတွင်း Bursa T1 လမ်းရထားလိုင်းကို Bursa မြို့တော်ဝန် Recep Altepe တစ်ချိန်ကစတင်မည်သူဇွန်လနှောင်းပိုင်းတွင်ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းငှါ, T1 လမ်းရထားလိုင်းကိုဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်၏အဆုံးသို့ရောက် လာ. ကလည်း, ခရီးအချိန်စတင်မည်ကျောင်းများ၏ tramway အဖွင့်ကပြောသည်။ T က 1 ရထားလမ်းအလောင်းတော်ထားခဲ့ပါတယ်, လေ့လာမှု၏အဆုံးသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ မြို့တော်မြို့တော်ဝန် Recep Altepe, Atatürk Caddesi မိမိပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်နိုင်ရန်အတွက်ဆောက်လုပ်ရေးအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးအောင်မှဖျော, ဇွန်လအတွက်အချိန်စုံစမ်းရာလမ်းရထား, Herald ကျောင်းဖွင့်ပွဲနှင့်အတူကာလ၌သူတို့ခရီးစတင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Altepe, Bursa နှင့်တိုင်းဧရိယာ၌ခေတ်မီမြို့ဖြစ်လာဆီသို့ဦးတည်ကြောင်းပြောင်းလဲမှုခွံ, သေချာအပြင်းအထန်လုပ်ဆောင်, "Bursa, ဖော်ပြထား ...
Bursa လေကြောင်းလိုင်း3လအတွင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်စတင်မည် 14 / 08 / 2013 Bursa လေကြောင်းလိုင်း3လတွင်လေယာဉ်ခရီးစဉ်စတင်မည်: Metropolitan မြို့တော်ဝန် Recep Altepe, Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် Bursa လေကြောင်းလိုင်းအတွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည် (BHY) ကိုလေ့လာရေးခရီးနှောင်းပိုင်း3လအတွင်းစတင်ပါလိမ့်မယ်ကြေညာခဲ့သည်။ AK ပါတီပြည်နယ်အဖွဲ့အစည်း Merinos Atatürkကွန်ဂရက်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုစင်တာကိုကို Grand Terrace မှာကျင်းပဘို့သန့်ရှင်းသောအခမ်းအနားဖြစ်ခဲ့သည်။ AK ပါတီပြည်နယ်ကိုသမ္မတ Sadat Yalcin အိမ်ရှင်ကြောင်းအခမ်းအနား, ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် Bulent Arinc က, Metropolitan မြို့တော်ဝန် Recep Altepe, Bursa အမတ်များခေါင်းဆောင် Matlin, Ismail Aydın, Hakan Cavusoglu, Kemal Şerbetçioğlu, Ismet ရေ Tulin Erkal မြေ, ဘဝ Candemir သံမဏိနှင့် Bedrettin Yildirim , 23 ။ လူထုအခြေပြုသက်တမ်းအမတ်များ, ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး, ...
အစ္စတန်ဘူလ်-Adapazari ခရီးသည်ရထားခရစ္စမတ်ရှေ့တော်၌ထိုအချိန်ကနေစတင်ပါလိမ့်မယ် 02 / 08 / 2014 အစ္စတန်ဘူလ်-Adapazari ခရီးသည်ရထားခရစ္စမတ်ရှေ့တော်၌ထိုအချိန်ကနေစတင်ပါလိမ့်မယ်: သိပ္ပံ, စက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Fikri အဆိုပါခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးမီးရထားရေကြောင်းခရီးရှည်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာခရစ်စမတ်အလင်းမရောက်မီ start ကပြောပါတယ်။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဝန်ကြီးအသိဥာဏ်အလင်း Kocaeli, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများကို အကြောင်းပြု. သတင်းအချက်အလက်ကိုပေး၏။ အလင်းအလုပ်မလုပ်ဖို့ခရီးသည်ရထားများအတွက်အချက်ပြအလုပ်ဆက်လက်ကြောင်းစကားပုံထဲမှာအစ္စတန်ဘူလ်-Adapazari လိုင်းတစ်ခရီးသည်လိုင်းထူထောင်ရန်နေ့စဉ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန် 8 အချိန်ပြုမည်အနည်းဆုံး 1000 ခရီးသည်ရထားလည်ပတ်မည်ဟုဆိုသည် "ဟုဆင်ခြေဖုံးရထားဝန်ဆောင်မှုခရစ္စမတ်မတိုင်မီစတင်ပါလိမ့်မယ်" ဟုသူကပြောသည်။ ဝန်ကြီးများအလင်း, ဒီလ Kaynarca-Agva ကမ်းခြေ built-in ခံရဖို့လမ်းများအတွက်တင်ဒါပြင်ဆင်မှု၏ပင်လယ်နက်အဘို့အမြောက် Marmara ကားလမ်းနူးညံ့သောကြောင့် ...
Elvan: Ordu-Giresun လေဆိပ်၏ပထမတစ်ဝက်တစ်နှစ်အချိန်ကာလသတ်မှတ်ပျံသန်းမှုစတင်ပါလိမ့်မယ်
ယခုအချိန်တွင် 22 ကီလိုမီတာ Kadikoy-Kartal မက်ထရိုသြဂုတ်လ 17 အတွက်အချိန်ပေါ်စတင်မည် လာ. ,
Bursa လေကြောင်းလိုင်း3လအတွင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်စတင်မည်
ယူကရိန်းရဲ့ယူရို 2012 ရထားလမ်း, မြေနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဘိတ်လေကြောင်းလိုင်း။
လီမာ, 224 ယူကရိန်းမှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့မြေအောက်ဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်များအတွက်ယူရိုသန်း